Ndandibonakala Ndinayo Yonke Into—Umculo, Udumo Nemali
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBelize Kriol IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPangasina IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
“Ndandibonakala Ndinayo Yonke Into”
Kubalisa uStéphane Wallace Turcotte
UNYAKA WOKUZALWA: Ngo-1962
UBOMI BANGAPHAMBILI: Wayeziphethe kakubi
Ndazalelwa eMontreal, isixeko esikhulu kwiphondo laseKhanada iQuebec. Mna nabantwana basekhaya abathathu sakhuliswa ngabazali abasithandayo eRosemont. Sasihlala kamnandi.
Ndisengumfana, ndandiyithanda iBhayibhile. Ndikhumbula ndina-12, ndifunda ngendlela uYesu awayezenza ngayo izinto kwiTestamente Entsha ibe ndandiyithanda loo nto. Ndandifuna ukumlinganisa kuba wayebathanda abantu. Okubuhlungu kukuba, ndakuba mdala yaphela yonke loo nto, ngenxa yeetshomi endazikhethayo.
Utata wayedlala isaxophone ibe ekuhambeni kwexesha wandipha ngenxa yokuba ndandimfuzile ngokuthanda umculo. Ndandiwuthanda umculo, kangangokuba ndafunda ukudlala iguitar. Ekuhambeni kwexesha, siliqela labahlobo sasihamba sicula. Abavelisi bomculo abaziwayo bandiqaphela baza bafuna ukundiqesha. Ndasayina isivumelwano nenkampani enkulu erekhodayo. Umculo wam waya usaziwa ibe wawusoloko udlalwa kwirediyo yaseQuebec.
Ndandibonakala ndinayo yonke into. Ndandisemtsha, ndidumile ibe ndinemali kuba ndandisenza umsebenzi endiwuthandayo. Emini ndandisiya ejimini, ndibuzwa ngomsebenzi endiwenzayo, abantu bendicela ukuba ndisayine izinto zabo ibe ndivela naseTV. Ebusuku ndandicula ndisiya nasezipatini. Ukuze ndingoyiki, ndaqalisa ukusela utywala ndisemncinci, kodwa ekuhambeni kwexesha ndandisebenzisa neziyobisi. Ndandisenza unothanda ndiziphethe kakubi.
Abanye abantu babeyibawela indlela endandiphila ngayo kuba ndandibonakala ndonwabile. Kodwa ngaphakathi, ndandiziva ndingento yanto, ingakumbi xa ndihleli ndedwa. Ndithe ndisaphumelele ndinjalo, abantu endisebenza nabo babulawa yiAIDS. Ndandothukile! Nangona ndandiwuthanda umculo, kodwa indlela endandiphila ngayo ndandingayithandi.
INDLELA IBHAYIBHILE EYABUTSHINTSHA NGAYO UBOMI BAM
Nangona ndandiphumelele, ndandibona kona ukuba ikhona into engahambi kakuhle ehlabathini. Ndandizibuza ukuba, kutheni kungekho bulungisa kangaka nje? Kutheni kungekho nto uThixo ayenzayo? Phofu, ndandisoloko ndithandazela ukuba uThixo andiphendule. Xa ndandiseholideyini, ndaphinda ndaqalisa ukufunda iBhayibhile. Nangona ndandingaziqondi izinto endazifunda, ndagqib’ ekubeni sele kuza kutshatyalaliswa.
Ngoxa ndandifunda iBhayibhile, ndabona ukuba uYesu wakhe wazila ukutya kangangeentsuku eziyi-40. (Mateyu 4:1, 2) Ndaqonda ukuba, ukuba ndenza into efanayo, uThixo wayeza kuzityhila kum. Ngenxa yoko ndabeka usuku endandiza kuqala ngalo. Kwiiveki ezimbini ngaphambi kokuba ndiqalise ukuzila, ankqonkqoza amaNgqina KaYehova amabini ibe ndawamkela ngokungathi kudala ndiwalindele. Ndalijonga ntsho emehlweni iNgqina elinguJacques ndaza ndalibuza, “Singayazi njani into yokuba siphila kwimihla yokugqibela?” Ukundiphendula latyhila eBhayibhileni laza lafunda eyesi-2 kuTimoti 3:​1-5. Ndawabuza imibuzo emininzi ibe ndayithanda indlela awandiphendula ngayo esebenzisa iBhayibhile. Emva kwezihlandlo eziliqela endityelela, ndabona ukuba akuyomfuneko ukuba ndizile.
Ndaqalisa ukufunda iBhayibhile namaNgqina KaYehova. Ekugqibeleni, ndazicheba iinwele ndaza ndaqalisa ukuya kwiHolo yoBukumkani. Indlela endamkelwa ngobubele ngayo, yandenza ndaqiniseka ukuba ndiyifumene inyaniso.
Ukuze ndiphile ngokuvumelana nezinto endizifunde eBhayibhileni, kwafuneka nditshintshe kakhulu. Ngokomzekelo, kwafuneka ndiyeke iziyobisi nokuziphatha kakubi. Kwafuneka ndiyeke nokuhleli nje ndicingela mna, kodwa ndikhathalele nabanye abantu. Njengokuba ndandikhulisa abantwana ndindedwa, kwafuneka ndibahoye abantwana bam ababini ndize ndibafundise neBhayibhile. Ndayeka ukucula ndaza ndafuna umsebenzi ophantsi kumzi-mveliso.
Kwakunzima ukutshintsha. Njengokuba ndandiyeka ukusebenzisa iziyobisi, ndandimane ndibuyela kuzo. (Roma 7:19, 21-24) Eyona nto yayinzima kukuyeka ukuziphatha kakubi. Umsebenzi omtsha wawundenza ndidinwe, ibe ndandingade ndiyamkele into yokufumana umvuzo omncinci. Imali endandiyenza ngeeyure nje ezimbini emculweni, kulo msebenzi mtsha ndandiyifumana emva kweenyanga ezintathu.
Umthandazo uye wandinceda ndakwazi ukutshintsha. Ndifumanise nokuba ukufunda iBhayibhile yonke imihla kubalulekile. Kukho iivesi zeBhayibhile eziye zandikhuthaza kakhulu. Enye yazo yeyesi-2 kumaKorinte 7:1, ekhuthaza amaKristu ukuba, ‘azihlambulule kuko konke ukudyobheka kwenyama nokomoya.’ Esinye isibhalo esindincede ndaziyeka izinto endandizenza ngamaFilipi 4:​13, athi: “Ezintweni zonke ndinamandla ngenxa yalowo undomelezayo.” UYehova uThixo wayiphendula imithandazo yam ibe ekugqibeleni ndade ndaphila ngokuvumelana nenyaniso eseBhayibhileni. Loo nto yabangela ndanikela ngobomi bam kuye. (1 Petros 4:1, 2) Ngo-1997 ndabhaptizwa ndaliNgqina LikaYehova.
INDLELA ENDIYE NDANCEDWA NGAYO
Ndiqinisekile ukuba, ukuba bendisenza izinto ngala ndlela yakudala, ngendingasaphili. Kodwa ngoku ndonwabe nyhani. Inkosikazi yam endiyithandayo uElvie, iyintsikelelo. Ngoku siyakuvuyela ukufundisa abantu iBhayibhile. Lo msebenzi uyasanelisa. Ndiyavuya nyhani kuba uYehova wanditsala.​—Yohane 6:44.
Ndandibonakala Ndinayo Yonke Into
Ndamangaliswa Ziimpendulo ZeBhayibhile Ezicacileyo Nezivakalayo